के छ फरक एमजी हेक्टर प्लस र हेक्टरमा ? | Automotive News Nepal
के छ फरक एमजी हेक्टर प्लस र हेक्टरमा ? ३० असार, २०७७
एमजी हेकटर इन्डियाले नयाँ एसयूभी हेक्टर प्लस लन्च गरेको छ । सो एसयूभी मूलरुपले एमजी हेक्टरको ६ सिटर भर्सन हो । यद्यपि हेक्टरको तुलनामा यसमा केही परिवर्तन गरिएको छ ।
साइज र लुक
हेक्टरको तुलनामा हेक्टर प्लसको लम्बाई ६५ एमएम बढी रहेको छ । यसको फ्रन्ट र रियर बम्परको डिजाइन फरक र बढी तौलको रहेको छ । हेक्टर प्लसमा ग्लोसी ब्ल्याक ग्रिल, नयाँ एलईडी डे टाइम रनिङ लाइट, नयाँ हेडल्याम्प, नयाँ फ्रन्ट र रियर बम्पर, नयाँ डिजाइनको रियर टेलल्याम्प, बोल्ड देखिने स्किड प्लेट्स, फ्लोटिङ सिग्नल टर्न इन्डिकेटर्स, शार्क फिन एन्टिना र ड्युल टोन मेसिन्ड अलोय ह्वील समावेश छ ।
हेक्टर प्लसमा ३ लाइनमा सिट रहेको छ । जसले गर्दा यसलाई हेक्टर भन्दा फरक देखाउँछ । यसको दोस्रो लाइनमा २ क्याप्टेन सिट रहेको छ । हेक्टर प्लसमा टेन ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री रहेको छ । जबकि हेक्टरमा ब्ल्याक अपहोल्स्ट्री रहेको छ । यसको ड्यासबोर्ड, सेन्ट्रल कन्सोल र डोर प्याड्मा सिल्भर हाइलाइट समावेश छ ।
हेक्टर प्लस एसयूभीमा जुन प्रकारको फिचर समावेश गरेको छ हेक्टरमा पनि उस्तै फिचर रहेको छ । यसमा १०.४ इन्च टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलजी, ८ स्पिकर इन्फिनिटी सराउन्ड साउन्ड सिस्टम, ७ इन्च मल्टी इन्फर्मेसन डिस्प्ले, एम्बिएन्ट लाइटिङ, अटो क्लामेट कन्ट्रोल, ठूलो प्यानोरमिक सनरुफ, पावर्ड आउट साइड रियर भ्यु मिरर र पावर एड्जस्टेबल ड्राइभर सिट जस्ता फिचर रहेको छ । हेक्टर भन्दा फरक हेक्टर प्लसमा टेलगेटको लागि ह्यान्स फ्रि ओपनिङ फंक्सन समावेश छ ।
हेक्टर प्लसमा हेक्टरकै इन्जिन जडान गरिएको छ । यसमा १.५ लिटर पेट्रोल, १.५ लिटर पेट्रोल हाइब्रिड र २ लिटर डिजेल इन्जिन समावेश रहेको छ । दुबै इन्जिनले पेट्रोल भर्सनमा १४३ पीएसको पावर र २५० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । डिजेल इन्जिनले १७० पीएसको पावर र ३५० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । सो ३ वटै इन्जिनमा ६ स्पिड म्यानुअल गियरबक्स समावेश रहेको छ । बिना हाइब्रिड भएको पेट्रोल इन्जिनको साथमा ड्युअल क्लच अटोमेटिक गियरबक्सको विकल्प पनि रहेको छ ।
एमजीको एसयूभी एमजी एचएस छिट्टै नेपालमा आउने
काठमाडौं – एमजी अर्थात मोरिस ग्यारेजको आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट मोटर्सले...
वेबसाइटमा समावेश भयो एमजी हेक्टर प्लस, छिट्टै लन्च हुने
एमजी मोटर इन्डियाले एमजी हेक्टर प्लसको लिस्ट वेबसाइटमा राखेको छ । सो एसयूभी कम्प...
अर्काे महिना लन्च हुने भयो एमजी हेक्टर प्लस, यस्तो छ डिटेल
एमजी मोटर्सले भारतमा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढाउँदै गएको छ । कम्पनीले अर्काे महिना...